3-da erey ee muranka ka dhex dhaliya qoyska (iska-ilaali) - Muraayad
3-da erey ee muranka ka dhex dhaliya qoyska (iska-ilaali)
“Kuwaara nabad iyo barwaaqo” waa ducada ugu horreeysa ee Soomaalida ay ugu duceyso qoys walba oo cusub marka la galbinayo.
Hadii aad si fiican u eegto ducadan, Nabad ayaa loogu duceeyaa qoysaska cusub, waana sheeyga ugu muhiimsan ee qoys walbaa rajo ka qabo in ay helaan.
Balse nasiib darro, waxaa soo batay in xasiloonida guryaha Soomaalida ay sii yaraanayso sababo badan awgood.
Taas waxay sababtay in furiinka Soomaalida uu aad u kordhayay sanadihii lasoo dhaafay.
Si aan gacan uga geysanno daaweynta dhibaatada qoysaska Soomaaliyeed, waxaan halkaan idiin kugu soo gudbinaynaa talooyin ku aadan yareynta khilaafaadka soo kala dhex gala qoysaska.
Waxaan ku bilaabaynaa 3 erey oo sababi kara in uu muran ka dhex bilowdo lamaanaha is qaba, murankaas hadii aan laga hortaginna wuxuu isu beddeli karaa khilaaf.
1 – “Mar walba”
Jaime oo ah khabiir ku takhasusay xiriirka qoyska ayaa sheegay in ereyga “Mar walba” lagu muujiyo wax waadax ah oo aan shaki ku jirin.
Haddii aad eraygaas u isticmaashid in aad ku tilmaamto dabeecadaha lamaanahaaga waxaa suurto gal ah in khilaaf uu dhaliyo.
“Tusaale, hadii aad ka xanaaqsantahay in lamaanahaaga uu dharkiisa kaga tagay dhulka ama meel aanan habooneyn, xaq waad u leedahay in aad ka xanaaqdo,’’ Jamie ayaa dhahay sidaas.
Wuu sii watay hadalkiisa: “Laakiin xaqiiqda ayaa ah, badanaa, lamaanahaaga maalin walba dharkiisa kagama tago dhulka. Waxaad u ogolaataa lamaanahaaga in mar mar khaladaadka fudud ka dhacaan, waxaadna ogaataa in adiga laguugu dan leheyn ama lagugu dhibeynin.”
Waxaa hubaal ah ragga Soomaalida in ay wax badan dhagahooda ku maqlaan ereyga “mar walba sidaas ayaad sameesaaa,’’ balse runtu tahay in mar mar keliya uu khaladkaas dhaco.
Ogoow waa suurto gal in ay jiraan dad ereygaan “marwalba” uu ku haboon yahay in lagu tilmaamo maadaama ay si dhab ah khaladaad koodu usoo noq noqdo.
Aan soo qaadano tusaale ku aadan ereygan “mar walba” si aan u fahanno qaabka uu u dhalin karo muran ama dagaal dhex mara lamaanaha.
Asli ayaa seygeeda Xasan u sheegtay in walaalkeed oo arday ku ah waddan shisheeye uu u baahan yahay lacag uu howl yar ku fushado, waxayna ka codsatay in uu $50 u diro.
Xasan ayaa ka ogolaaday, wuxuuna u sheegay in uu u diri doono fursad markuu u helo.
Asli ayaa habeenkii xigey weydiisay in lacagtii uu u diray iyo in kale, laakiin Xasan ayaa ka cudurdaartay in uusan u dirin sababtuna ay ahayd in uu ka mashquulay.
Asli ayaa habeenkii labaad ogaatay in lacagtii wali aanan la dirin waxayna ku xanaaqday Xasan iyada oo isticmaashay ereyga ah “mar walba” waxa aan kaa codsado ma sameeysid.
Xasan oo sida caadada ah qaabila codsiyada xaaskiisa ayaa waxa uu dareemi karaa in ereygaas uusan u qalmin in lagu tilmaamo, wuxuuna xaq u leeyahay in uu ka xanaaqo maadaama uusan mar walba dayicin codsiga xaaskiisa.
Sida aan ku aragnay tusaalaha kor ku xusan, waxaa muhiim ah in ereygan “marwalba” aad ka fiirsato isticmaalkiisa waliba marka aad la hadlaysid lamaanahaaga.
“Marna” waa erey tilmaama xaalad xad-dhaaf ah waxaana kuu wanaagsan in aadan isticmaalin.
“Hadii aad ku dhahdo lamaanahaaga ‘marna’ waxaas ma samaysid, waxaa laga yaabaa in wanaagga dabeecadahiisa ama dabeecadaheeda ay hoos u dhacaan’’, waxaa sidaas tiri Darci Brown, oo ah khabiir dhinaca xiriirka qoyska ah.
Brown oo sii sharraxaysa ayaa tiri: “Sababtu waxay tahay, ereygaan wuxuu muujiyaa eedeyn adag ama xad-dhaaf ah taas oo qofka kasoo bixisa jawaab is difaacid ah, waxayna liddi ku tahay ka hortaga khilaafka labada qof.’’
Tusaale, Xasan iyo Asli;
Xasan ayaa ku qabsaday Asli in gurigooda ‘marna’ hilib macaan laga karinin.
Eedeyntaas ayaa waxaa kasoo horjeesatay Asli oo ku doodday in uu soo xusuusto hilibkii uu ku qadeeyay jimichii ugu dambeeyay oo ay hilib ari qado ugu sameysay isaga iyo saaxiibkiis Warsame.
Sida aad ka aragtaan tusaalahan, ereyga “marna” wuxuu wataa eedeyn adag, eedeymaha qaar oo badanaa xaqiiq ahayn ayaa keena in muran uu dhasho, ee fadlan iska ilaali ama ka taxadar sida aad u isticmaasho.
Marka xaaskaaga ama seygaaga kula wadaagto/wadaago arrimo ku saabsan shucuurtooda, Jawaabtaada ha ku bilaabin “Haye, Laakiin…”. Taasi waxay hor istaagaysaa in uu hadalka sii socdo.” Lynell Ross oo ah khabiir haga xiriirka qoyska ayaa sidaas tiri.
Ross oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaas raacisay: “In aad ku bilowdo jawaabtaada “Laakiin” waxay muujinaysaa in aad diidan tahay macluumaadka aad dhegeysatay.
Marna waxay u muuqanaysaa in aadan si fiican u fahmin, ama aadan danayneynin in aad aqbasho xaqiiqda macluumaadka lagula wadaagay.”
Arrintaas waxay sababaysaa in meeshaasi muran ka dhasho. Sidaas darteed waxaa kuu haboon in xaaskaaga ama seygaaga aad siiso fursad ay shucuurtooda kugula wadaagaan iyaga oo aan ka baqaynin diidmo ama in aad ka hor imaato dareenkooda.
Sidaas waxay idinka caawinaysaa in xiriirkiina uu wanaag ku dhisnaado.
Previous articleNinkeyga faa’iido malahan… ma ogola shaqada guriga
Next articleQeexitaanka ugu wanaagsan ee Jacaylka lagu sameeyay